Laser Laser Diode 755 808 1064, Laser miova - LaserTell
Vacuum RF mihodina fanesorana cellulite fanesorana tavy ...
Cavitation vaovao + RF + Masinina manalefaka vacuum ...
Hot fivarotana milina manify Vacuum Rollers RF cav ...
Teôria 1. Ny laser infrared dia mampihena ny fijanonan'ny hoditra amin'ny alàlan'ny fanafanana ny hoditra sy ny angovo RF miditra lalina ao anaty vatan'ny mpampifandray. 2.Ny fitambarana synergistic an'ny laser infrared sy ny angovo RF izay mampitombo ny fihanaky ny oxygen amin'ny intracellular amin'ny alàlan'ny hoditra fanafanana. 3.Ny teknôlôjia manaparitaka ny hoditra dia mahatonga ny angovo RF hiditra amin'ny hoditra voaforitra manokana, manatsara ny vokatra sy ny fiarovana, eny fa na dia ny fitsaboana eo amin'ny hodi-maso ambony aza. 4. Vacuum miampy fanamboarana manokana namboarina manipulate mitarika na dia RF ...
Anti-fahanterana Wrinkle Remover Face Lifting Radar L ...
Vidin'ny fifaninanana HIEMT EMS vatana mihinana ...
Inona ny HI-EMT? Fitaovana HI-EMT natao ho an'ny tanjona kanto, manana mpangataka 2 (roa) mahery vaika kokoa. Teknolojia avo lenta izy io ao anaty vatan'ny vatana tsy manafika, satria tsy hoe MANDRITSAKA ny FAT fotsiny, fa koa manangana MUSCLE. Ankoatr'izay, ny fitsaboana dia tsy mitaky fanatoranana, fanamoriana, na tsy fahazoana aina. Raha ny marina, ny marary dia afaka mipetrapetraka sy miala sasatra, raha ny fitaovana kosa dia mitovy amin'ny maherin'ny 20.000 crunches na squats tsy misy fanaintainana. Famaritana teknolojia EMS herinaratra mahery vaika ...
Ny orinasanay dia misahana manokana ny hoditry ny vehivavy, hamahana ny olan'ny hoditra, avelao hanova voninahitra ianao.
LaserTell Technologies (UK) Co., Ltd. dia mpisava lalana amin'ny fampidirana loharano eo amin'ny sehatry ny fitsaboana estetika ara-teknolojia Lasers. Androany, LaserTell Technologies (UK) Co., Ltd. no mpanavao ny fanohanana ara-teknika, serivisy aorian'ny fivarotana, ny fiofanana amin'ny klinika, ny marketing, ary ny fakan-kevitra amin'ny tsenan'ny fandidiana sy ny hatsarana avo lenta.
New Laser teknolojia fanesorana volo amin'ny fibre Te ...
Theory of Distributor maniry diode laser 980nm ...
Newest Alemana bara epilation portable maharitra ...
Professional 10600nm Fractional CO2 Laser denta ...
Fipetrahana manerantany manerana ny firenena 80 manerantany
Vokatra asongadina, Sitemap, Esory ny fanesorana volo amin'ny Shr Ipl, Hifu Mini, Jiro Flash Ipl Xenon, Fanesorana ny volo amin'ny laser sy ny famelomana ny hoditra, 808 Nm, Fanesorana volo amin'ny laser Laser Ipl, Vokatra rehetra Room 308, No.12, Jingsheng South 2nd Road, Distrikan'i Tongzhou, Beijing, Sina